Mudane Madaxweyne ma ogtahay hadal-heynta toddobaadkan ugu badan Soomaalida dhexdeeda in ay tahay xiisadda gobolka Galgaduud oo aad booqatay markii saddexaad ilaa iyo haddana aadan xal ka gaarin ismari-waagii ka jiray? Waxaa la isweydiinayaa sababta uu Madaxweynuhu ugu noq-noqonayo Galgaduud, gobollada kalena uusan qaarkood weli cagta dhigin? Maxay tahay macdanta gaarka ah ee ku aasan Galgaduud iyo sirta booqashooyinkaaga isdaba-joogga ah?
Ma ogtahay Madaxweyne in saddex bil shaqaalaha dowladda aysan mushaar qaadan oo ay silac ku nool yihiin?
Mudane ma la socotaa in qaar ka tirsan wasiirrada cusub durba lala yaabban yahay maamul xumadooda oo fadeexooyin ay hareeyeen, halka wasiirro daacdnimo ku shaqeynayayna ay durba niyad jabeen musuqmaasuq baahsan dartii?
Ma laguu sheegay ustaadow in 28-ka xeer-ilaaliye ay 17 ka tirsan hal qabiil yihiin halka jilib ka mid ah afarta qabiil ee waaweyn uu kaligii 9 xubin leeyahay? Labo qabiil oo afarta iyo barka qabiilka ka tirsan midna xubin kuma lahan xeer-ilaalinta ee caddaaladdaasi ka warran mudane?
Mudane maxaa ka jira wararka sheegaya in maxaabiista xabsiga dhexe ku jira 90 boqolkiiba ay isku beel yihiin? Mase ogtahay Madaxweyne in xukunnada ay fuliyaan hay’adaha garsoorka ay ku saleeyaan hadba sida ay u kala jeebab waaweyn yihiin eedeysaneyaasha la hor keeno maxkamadaha?
Previous articleCaddadka 16-aad ee Xaqiiqa Times
Next articleWarfaafin mise Sirfaafin?